“Ikhefu yamaviki amabili yilokho okudingwa iqembu!” | Scrolla Izindaba
“Ikhefu yamaviki amabili yilokho okudingwa iqembu!”
Umqeqeshi we-Supersport United uKaitano Tembo ukholelwa ekutheni le khefu yamaviki amabili izomvumela ukuthi asebenze ngamaqhinga amasha nabadlali abasha.
“Ikhefu yamaviki amabili izonika abafana isikhathi sokululama kahle futhi bathole nesikhathi sokuphumula ngoba kwesinye isikhathi sivame ukusebenza ngokweqile,” uyasho.
“Kusukela ngoMasingana asikabi nalo usuku lokuphumula ngakho ngicabanga ukuthi sizobanikeza cishe izinsuku ezine kusukela manje bese sibuya ngoLwesithathu sizoqala ukulungiselela ukudlala ne-Stellenbosch.”
Umdlalo olandelayo we-United izobe idlala ne-Stellenbosch FC ngoLwesine oluzayo.
Amadoda kaTembo njengamanje asendaweni yesithathu ku-DStv Premiership, ngamaphuzu angama-34 emidlalweni engama-20.
I-Matsatsantsa-a-Pitori idlale ngokulingana emidlalweni emithathu futhi yahlulwa kokodwa emidlalweni yabo emine edlule yeligi, badlala ngokulingana ngegoli elilodwa kwelilodwa ne-Kaizer Chiefs nabadlali abahamba phambili, kodwa okungahambisani ne-Orlando Pirates. Ngemuva kwalokho ahlulwe Amazulu ngegoli elilodwa eqandeni komunye umdlalo behluleka ukuthola igoli bebhekene ne-TS Galaxy.
I-United igcine ukunqoba phakathi kaNhlolanja ngesikhathi ishaya i-Cape Town City ngamagoli amabili eqandeni.
Khonamanjalo, umqeqeshi we-Swallows FC uBrandon Truter ukhathazekile ngokuthi iqembu lakhe liyabuyela emuva emujahweni wokuthola isicoco.
“Siyawashaya amagoli kodwa futhi sidedela amagoli ngendlela ekhathazayo – asikubeke kanjalo,” kuzikhalela uTruter.
IZinyoni zigcine ukunqoba umdlalo ngomhla ziyi-16 kuMasingana – zinqoba ngegoli elilodwa eqandeni sidlala ne-Baroka FC – futhi sezidedele amagoli ayisikhombisa emidlalweni yazo eyisithupha edlule, zibhalise imidlalo eyisikhombisa eyidlale ngokulingana kulandelana.